Password Mining Chip ထုတ်လုပ်သူ Nano Labs သည် US IPO အတွက် လျှောက် ထားသည် – Pandaily
Password Mining Chip ထုတ်လုပ်သူ Nano Labs သည် US IPO အတွက် လျှောက် ထားသည်
Jun 15, 2022, 20:55ညနေ 2022/06/15 23:04:53 Pandaily
တရုတ် Password Mining Chip ထုတ်လုပ်သူ Nano LabsNasdaq တွင် ကန ဦး အများပိုင် ရောင်းချ မှု (IPO) အတွက် လျှောက်လွှာ ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ရရှိရန် အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) သို့ မကြာသေးမီက တင်သွင်းခဲ့သည်။
Nano Labs ကို ခါ နာ န် ပူးတွဲ ဥက္က chairman ္ဌ ဟောင်း Kong Jianping က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိက ဝင်ငွေ မှာ သတ္တုတွင်း စက် များ ရောင်းချ ခြင်းမှ ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာ အရ AMTD Global Markets, Maxim Group နှင့် UP Fintech Holding တို့သည် ပူးတွဲ underwriters များဖြစ်သည်။
Tianyan စစ်ဆေး မှုအရ Nano Labs သည် ဟောင်ကောင်တွင် မှတ်ပုံတင် ထားပြီး အဓိက ရှယ်ယာရှင် နှစ် ဦး မှာ Kong Jianping နှင့် Sun Qifeng ဖြစ်သည်။ ယခင် ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် စီအီးအို ဖြစ်ပြီးနောက် တစ်ခုမှာ ဒု ဥက္က chairman ္ဌ ဖြစ်သည်။ သူတို့ အားလုံးသည် Nasdaq စာရင်းဝင် ချစ်ပ် ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ ခါ န ာန် တွင် အမှုဆောင် များဖြစ်သည်။
Zhejiang Haowei Technology Co., Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံ ရှိ Nano Labs ၏အပြည့် အဝ ပိုင်ဆိုင် သည့် လက်အောက်ခံ ဖြစ်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Hangzhou တွင် ရုံးချုပ် ဖွင့်လှစ် ထားသော Haowei သည် ဖြန့်ဝေထားသော ချစ်ပ် တည်ဆောက် သူဖြစ်သည်။ Meta-Universe အောက်ရှိ ဖြန့်ဝေထားသော ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းစဉ် များ၊ အဓိက ကွန်ယက် များ၊ အတု ထောက်လှမ်း ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကွန်ပျူ တာ၊ ဗွီဒီယို ကုဒ်နံပါတ် များနှင့်အခြား နယ်ပယ် များအတွက် bandwidth မြင့်မား သော၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အထူး ပရိုဆက်ဆာ ချစ်ပ် များနှင့် ဖြေရှင်းနည်း များကို ကုမ္ပဏီက အာရုံစိုက်သည်။
Kong Jianping သည် ခါ န ာန် ပြည် တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ကုမ္ပဏီ တွင် တွဲဖက် ဥက္က chairman ္ဌ အဖြစ် ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး Nasdaq တွင် ခါ န ာန် ပြည်ထောင် စုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၀၊ သြဂုတ်လတွင် Kong Jianping နှင့် Sun Qifeng တို့သည် ရာထူး သက်တမ်းကုန်ဆုံး သောကြောင့် ပူးတွဲ ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် ဘုတ် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ရပ်စဲ ခဲ့သည်။ ထုိ႔ေနာက္ မစၥတာ ကြန္ သည္ ကုမၸဏီ သစ္ Hao Wei ကို တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး Blockchain ႏွင့္ AI နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ နည္းပညာ ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ သည့္ စီမံကိန္း မ်ား၏ Incubation ႏွင့္ Investment ကို အာ႐ံုစိုက္ လို ခဲ့သည္။
Nano Labs ၏ ထုတ်ကုန် များသည်အဓိကအားဖြင့် Bitcoin, Ethereum နှင့် Filecoin ကဲ့သို့သော cryptocurrencies များကို တူးဖော် ရန်အသုံးပြုသည်။ အလားအလာ များက Nano ၏ ၀ င်ငွေ သည်အဓိကအားဖြင့် virtual ငွေကြေး ဖြစ်သော GRIN ၏ သတ္တုတူးဖော်ရေး ဖြေရှင်းချက် မှရရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင်၎င်း၏ ၀ င်ငွေ အားလုံး သည်တရုတ် ဖောက်သည် များထံမှ လာသည်။ ပြည်ပ သို့ ရောင်းချ မှု တိုးချဲ့ ရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စင်ကာပူ တွင် လုပ်ငန်း ခွဲ တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Ant Group ၏ IPO ကိုပြန်လည် စတ င်ရန် တရုတ်က ငြင်းဆို ခဲ့သည်
အဆိုပါ အလားအလာ အရ Nano Labs သည် ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် ယွမ် ၂. ၁၃ သန်း (ဒေါ်လာ ၃ ၁၇, ၃ ၇၀) နှင့် ယွမ် ၃၉. ၄၄ သန်း ရှိခဲ့ပြီး အသားတင် အရှုံး မှာ ၃၇. ၇ သန်းနှင့် ယွမ် ၁၇၅ သန်း ဖြစ်သည်။ Nano Labs သည် IPO မှရရှိသော ရန်ပုံငွေ များကိုပိုမို အဆင့် မြင့်သော ASIC ချစ်ပ် များ၊ စမတ် ကွန်ယက် ကဒ် များ၊ အမြင်အာရုံ ကွန်ပျူတာ ချစ်ပ် များနှင့် meta-computing network platform Ipolloverse တို့ ကိုတည်ဆောက် ရန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ များ တည်ထောင် ရန်စီစဉ် နေသည်။
“ တရုတ် NFT အပတ်စဉ်” : Web3 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ စျေးကွက် ကျဆင်း မှုမှ လ စျြလြူရှု
ယခုအပတ်-NFT အခြေပြု "မိုဘိုင်း ငွ ေရှာ ခြင်း" ဂိမ်း STEPN သည် ပြည်တွင်း စကားဝှက် စည်းမျဉ်း များ၊ တရုတ် စတော့ရှယ်ယာ ဓာတ်ပုံ လိုင်စင် ဝက်ဘ်ဆိုက် Visual Culture Group သည် ပြည်ပ တွင် NFT ပလက်ဖောင်း များ ကိုစတင် မည်။
Web3 May 30 မေ 30, 2022
Utopia Labs မှ Paradigm ဦး ဆောင်သော ဒေါ်လာ ၂၃ သန်း Round A ရန်ပုံ ငွေကို ကြေငြာ ခဲ့သည်
Utopia Labs သည် Multisig Encrypted Wallet နှင့်တိုက်ရိုက် ပေါင်းစည်း ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော လစာ နှင့် ကုန်ကျစရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖြစ်ပြီး Paradigm မှ ဦး ဆောင်သော ဒေါ်လာ ၂၃ သန်း တန် ရန်ပုံငွေ ကို အဆုံးသတ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၂၉ ရက်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Web3 Jun 01 ဇွန် 1, 2022
China NFT အပတ်စဉ်-VC Exit Encryption
ဒီ တစ္ပတ္ ကေတာ့-Tencent-ထောက်ခံ ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ဝေသူ, NFT ၏ ခေတ် ရေစီး ကြောင်းကို တက် စောင့်ရှောက်, Terra ပြိုကျ ပြီးနောက် တရုတ် တရားဝင် မီဒီယာ password ကိုထိန်းချုပ် ခိုင်မာ စေရန် အချက်ပြ, Coinbase တန်ဖိုး ကျဆင်း အဖြစ် လက်ခံ ကမ်းလှမ်း မှု ဖျက်သိမ်း, etc
Web3 Jun 06 ဇွန် 6, 2022
PartyDAO ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၁၆. ၄ သန်း ရရှိ
Multiplayer cryptographic product ကို တည်ဆောက်ဖို့ မျှော် မှန်းချက် ရှိတဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင် မှု လျှော့ချ ထားတဲ့ software အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PartyDAO ဟာ a16z crypto က ဦးဆောင်ပြီး ဒေါ်လာ ၁၆. ၄ သန်း တန် ရန်ပုံငွ ေရှာ ပွဲ တစ်ခုကို ပြီးဆုံး ပြီလို့ ကြာသပတေးနေ့ မှာ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
Web3 Jun 10 ဇွန် 10, 2022